ကိုယ်အလေးချိန် - Cmoapi
CMOAPI သည် ထိပ်တန်းအရည်အသွေး Cetilistat အမှုန့်နှင့် Orlistat အလယ်အလတ်တန်းစား ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး တစ်လလျှင် 3100 ကီလိုဂရမ်အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ကာ အရည်အသွေးအပြည့်စုံဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO19001) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (14001) ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူပါ။
Cetilistat ၏ COA
Orlistat အမှုန့်၏ COA
သငျသညျအပေါငျးဆုံးရှုံးမှုဆေးပြားအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်စေနိုင်သည် သင်၏ရည်မှန်းချက်သည်အဝလွန်ခြင်းကြောင့်အပိုပေါင်ပေါင်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုပါကအွန်လိုင်းရောင်းရန်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးပြား p Orlistat / Cetilistat ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သို့သော် FDA မှတင်းကြပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များကြောင့်သင်ဆေးညွှန်းလိုအပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်ဆေးများကိုရှာဖွေနေပါကသင့်အနေဖြင့်စင်ကြယ်သောထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ရန်အတွက် CMOAPI နှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒြပ်ပေါင်းများကိုအရည်အသွေးအာမခံချက်ကိုခံကြရသည်။
သင်အဆီမစားပါက orlistat အလုပ်လုပ်ပါသလား။
သင်၏အစားအစာတွင်အဆီမရှိပါက၊ သို့မဟုတ်သင်အစာစားခြင်းကိုလက်လွတ်ပါက orlistat ဆေးသောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
တစ်ရက် orlistat ဘယ်လောက်ယူပါသလဲ။
Orlistat ကိုအများအားဖြင့်အဆီပါဝင်သောအဓိကအစာတစ်ခုစီနှင့်တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ် (ထိုထမင်းအတွက်ကယ်လိုရီ၏ ၃၀% ထက်မပို) အသုံးပြုသည်။ သင်ဆေးကိုသင်၏အစာနှင့်အတူစားနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အစာစားပြီးလျှင် ၁ နာရီအထိသောက်နိုင်သည်။
Orlistat lipase ၏လုပျငနျးတားစီး။ သင်သည်အစာနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးကိုသောက်သုံးပါကသင်စားသုံးသောအဆီ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်မဖြိုမချဘဲအူသိမ်လှုပ်ရှားမှုမှဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
မကြာခဏအူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှု၊ အဆီပြန်ထွက်ခွာမှု၊ အဆီပြန်သည့် rectal ယိုစိမ့်မှု၊ steatorrhea နှင့်လေဆာရောင်ရမ်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
သင်တစ်ကြိမ်မှာ orlistat ၂ ခုယူလို့ရပါသလား။
Orlistat သည်သင်စားသောအရာများတွင်အဆီများရှိမှသာအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အစာစားချိန်လွဲသွားလျှင်သို့မဟုတ်အဆီမရှိသောအစာကိုစားလျှင် orlistat ပမာဏကိုမသောက်ပါနှင့်။ သင်ဆေးထိုးရန်မေ့နေလျှင်စိတ်မပူပါနဲ့။ ပုံမှန်အတိုင်းသင့်နောက်မုန့်ညက်ဖြင့်တစ်တောင့်ကိုသာသောက်ပါ။ မေ့လျော့သောဆေးထိုးရန်အတွက်ဆေးနှစ်လုံးကိုအတူတကွမသောက်ပါနှင့်။
ဘယ် orlistat or Xenical ကပိုကောင်းလဲ။
orlistat နှင့် Xenical အကြားခြားနားချက်မှာ orlistat သည်ဆေး၏ယေဘုယျဗားရှင်းဖြစ်ပြီး Xenical ကိုတံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Xenical သည် Orlistat ထက်စျေးကြီးပြီးကိုယ်အလေးချိန်တက်ဘလက်အဖြစ်လူသိများသည်။ Xenical ကို orlistat ကဲ့သို့ပင်အတိအကျယူသင့်သည်။
မင်း orlistat မှာသောက်လို့ရနိုင်မလား။
Orlistat သည်အရက်နှင့်မဆက်ဆံပါ၊ ထို့ကြောင့် Orlistat ကိုသောက်နေစဉ်အရက်ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသည်။ သို့သော်အရက်သည်ကယ်လိုရီပိုမိုများပြားသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် Orlistat သောက်နေစဉ်အရက်ကိုသောက်ခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်။ Orlistat ကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်မည်သို့လုပ်ရမည်အကြောင်းပိုမိုသောအကြံဥာဏ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Orlistat အစားအစာကိုသုံးပါ
orlistat အုပ်စုတွင် ၃ လအကုန်ပိုင်းတွင် lipid ပရိုဖိုင်းတွင်သိသိသာသာတိုးတက်မှုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ orlistat, metformin အုပ်စုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်အသီးသီးကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှုန်းသည် 3% နှင့် 40% နှင့် 16.7% ရှိခဲ့သည် (P - 3.3) ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်မျိုးဥထွက်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းရှိပြီးအထိခိုက်မခံနိုင်ခြင်းသည်
ငါတစ်နေ့တစ်ကြိမ် orlistat ယူနိုင်သလား?
ပုံမှန်ဆေးပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်သောက်ခြင်းဖြင့်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ် ၁၂၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အစားအစာတွင်အဆီမရှိပါကသို့မဟုတ်အစာစားပြီးလျှင်သင်သည်၎င်းကိုမသောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အယ်လီသည်အများအားဖြင့်ဆေးညွှန်းအရဆေးထိုးသူများတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော်လည်းအများအားဖြင့်ပြင်းထန်သည့်အသည်းဒဏ်ရာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အသည်းပျက်စီးခြင်းလက္ခဏာများကိုသင်တွေ့ရှိပါက Alli ကိုမသောက်ပါနှင့်သင့်ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပါ။
Orlistat သည်သွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်လက်တွေ့ကျသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကိုတိုးပွားစေပြီးထို့ကြောင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်လူနာများတွင်သွေးတိုးရောဂါကိုကုသရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။
Orlistat သည်အစာအိမ်နှင့်ပန်ကရိယ lipase ကိုတားဆီးပေးသောအရာဖြစ်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်တိုးပွားစေခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်သက်သေပြထားသောထိရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲသော်လည်းကောင်းမွန်သောအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသော်လည်း၊ ၎င်းသည်မကြာသေးမီကပြင်းထန်သောကျောက်ကပ်ဒဏ်ရာ (AKI) နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
Orlistat သည်ပန်ကရိယ lipase inhibitor ဖြစ်ပြီးအစာခြေလမ်းကြောင်းအတွင်းအဆီစုပ်ယူမှုကိုတားဆီးပေးသည်။ ၎င်းသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုမထိခိုက်သောကြောင့် orlistat တွင်စွဲလမ်းစေသောဂုဏ်သတ္တိများရှိချင်မှရှိလိမ့်မည်။
Orlistat FDA ကိုအတည်ပြုပါသလား။
Xenical (orlistat 120mg) ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် FDA ကဆေးညွှန်းထုတ်ကုန်အဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးအဝလွန်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည့်ကယ်လိုရီဓာတ်စာနှင့် တွဲ၍ အလေးချိန်လျော့နည်းပြီးနောက်ကိုယ်အလေးချိန်ပြန်လည်လျော့နည်းစေနိုင်သည်။
orlistat 120 mg ကိုသင်မည်ကဲ့သို့ယူပါသနည်း။
Orlistat ၏ပုံမှန်ဆေးထိုးမှုသည်တစ်နေ့လျှင်အဓိကအစားအစာသုံးမျိုးစီနှင့်တစ်ပါတ်လျှင် ၁၂၀ မီလီဂရမ်ဆေးတောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုချက်ချင်းမစားမီ၊ အစာစားချိန်အတွင်းသို့မဟုတ်အစာစားပြီးနောက်တစ်နာရီအကြာတွင်စားနိုင်သည်။ ဆေးတောင့်ကိုရေနဲ့မျိုသင့်တယ်။
Orlistat ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်ဆေးသောက်ပြီးနောက်ပထမခြောက်လအတွင်းဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက် Orlistat ကိုမသုံးတော့ပါကကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ စား၍ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်သည်။ သို့သော်သင်သည်ထိုနောက်မှအချို့သောကိုယ်အလေးချိန်တွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်။
Orlistat (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - alli) သည် FDA မှခွင့်ပြုထားသော OTC ဆေးဖြစ်သည်။ Orlistat သည်အစာစားချိန်တွင်ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့စုပ်ယူခြင်းမှတားဆီးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ orlistat အသုံးပြုမှု၏ပထမ ၆ လအတွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅ မှ ၁၀ ပေါင်အထိဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
alli®ဆေးတောင့်ကိုယူပြီးနောက်မည်မျှကြာမည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်ကယ်လိုရီလျှော့ချခြင်း၊ အဆီနည်းသောအစားအစာကိုလိုက်နာပါကပုံမှန်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကာalli®ဆေးတောင့်ကိုညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းသောက်ပါကပထမနှစ်ပတ်အတွင်းရလဒ်များကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်အများစုသည်များသောအားဖြင့်ပထမခြောက်လအတွင်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။
Orlistat (Xenical) သည်သင်၏မိသားစုဆရာဝန်မှသတ်မှတ်ထားသောဆေးဖြစ်သည်။ ဒါဟာကိုယ်အလေးချိန်ကူညီဖို့တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုများအရ Orlistat ကိုကျန်းမာစေခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည်အစားအစာသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်သင်၏အစာစားချင်စိတ်ကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။
လေ့လာမှုများအရပျှမ်းမျှ orlistat နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်သောအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းနှင့်ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းထက်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုများစေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အချို့လူများသည် orlistat ၏အကူအညီဖြင့် ၆ လအတွင်းသူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်။ အခြားသူများအတွက်မူထိရောက်မှုနည်းသည်။
ပန်ကရိယရောင်ခြင်းကို orlistat ရနိုင်ပါသလား။
နိဂုံးများကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံစာများအရ orlistat သည်လူနာအချို့တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးစူးရှသောပန်ကရိယရောင်ခြည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ orlistat စတင်ပြီးနောက်မကြာခင်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုနှင့်အတူတင်ပြလူနာများအတွက်, ပန်ကရိယ၏ရောဂါလက္ခဏာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ပန်ကရိယဒဏ်ရာရသောလူနာများတွင် orlistat ကိုသတိကြီးစွာအသုံးပြုရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Orlistat သည်ဆေးတောင့်တစ်ခုနှင့်ဆေးညွှန်းမဟုတ်သောဆေးထိုးခံ။ ပါးစပ်ဖြင့်ယူသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အဆီပါသောအဓိကမုန့်ညက်တစ်မျိုးတည်းနှင့်တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ်သောက်ပါသည်။ orlistat ကိုအစာစားချိန်တွင် (သို့) အစာစားပြီးလျှင် ၁ နာရီအထိသောက်ပါ။ အကယ်၍ အစာစားခြင်းကိုလွဲချော်သွားလျှင်သို့မဟုတ်အဆီမရှိလျှင်သင်ဆေးထိုးခြင်းကိုကျော်သွားနိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်လလျှင်ကိုယ်အလေးချိန် ၄ ပေါင်မှ ၈ ပေါင်ထိခြင်းသည်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ များများစားစားဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အတွက်အနည်းဆုံးအစောပိုင်းလများတွင်အစားအစာသည်ကျန်းမာသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့မဟုတ်အလေးချိန်သည်ရေရှည်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
Orlistat ကိုသောက်နေစဉ်ဘာကြောင့် poop orange လိမ်းတာလဲ။
ရေသည်ရေထက်သိပ်သည်းသောကြောင့်အူသိမ်အူသိမ်လှုပ်ရှားမှုသည်အိမ်သာတွင်လိမ္မော်ဆီကဲ့သို့ရေပေါ်တွင်ထိုင်နေမည်ဖြစ်သည်။ အချို့လူများက keriorrhea ၏အနံ့ကိုအားကြီးသောဓာတ်သတ္တုဆီအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူတစ် ဦး သည်ရေနံနှင့်အတူမစင်များကိုလည်းဖြတ်သန်းနိုင်သည်။
Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat အမည်ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှလူသိများသော Cetilistat သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေသောဆေးအသစ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Cetilistat ကိုအဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။
အဝလွန်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဟာရအများဆုံးရောဂါဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောအစာစားခြင်းဖြင့်ရလဒ်များကိုသတိမပြုမိနိုင်ပါ။ ဤအရပ်မှအဝလွန်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန် Cetilistat ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Cetilistat သည်အဆီ၏ပြိုကွဲခြင်းနှင့်စုပ်ယူမှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အူအတွင်းရှိ triglycerides ကိုဖြိုခွဲရန်အတွက်ပန်ကရိယ lipase ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ triglycerides သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ fatty acids များအဖြစ်မစုပ်ယူနိုင်ပါက၎င်းတို့မှထုတ်လွှတ်မှုကိုရရှိသည်။
၁။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီခြင်း၊ ကျန်းမာသော BMI ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီခြင်း။
2. ရလဒ်များကိုအချိန်တိုအတွင်းပေးသည်။ Cetilistat ကထို bikini ကိုယ်ထည်ကို ၁၂ ပတ်အတွင်းပေးသည်။
များသောအားဖြင့် Cetilistat အမှုန့်များကိုနှုတ်အားဖြင့် ၆၀ မီလီဂရမ်ဆေးတောင့်များဖြင့်ရောင်းချသည်။ အချို့လူများကအစာစားပြီးနောက်တွင်ယင်းကိုသောက်ရန်ပိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်စားသောက်ပြီးနောက်တစ်နာရီကျော်လွန်သင့်သည်။
Cetilistat သည်ကာလတိုဆေးဖြစ်ပြီးသင့်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းရန်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်စွဲခြင်းနှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သို့သော် Cetilistat သည် Orlistat ကဲ့သို့သောအခြားကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်နည်းဖြင့်သည်းခံနိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
ဘယ်သူက Cetilistat ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်၏ BMI သည် ၂၇ နှစ်ကျော်ပြီး ဖြစ်၍ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုကဲ့သို့သောအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကျန်းမာရေးပြproblemနာကိုသင်ခံစားနေရသည်။
ဗီတာမင်အီးနှင့် D အဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်း၊ မစင်ကြယ်ခြင်း၊ မသန့်ရှင်းသောအရေးတကြီးလိုအပ်မှု၊ ရောဂါပိုးမွှားထွက်ခြင်း， အဆီကျ s ထိုင်ခုံများ， အဆီများသောမစင်။
အကယ်၍ သင်ဆေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုလျှင်သင်စဉ်းစားရမည့်အရာနှစ်ခုရှိသည်။ သင်မည်မျှနောက်ကျပြီးနောက်လာမည့်အချိန်ဇယားကိုရောက်သောအခါ။ အကယ်၍ သင်ဆေးထိုးခြင်းကိုလက်လွှတ်လိုက်သည်ကိုသင်သတိရလျှင်သတိထားမိသည်နှင့်ချက်ချင်းယူပါ။
သင်၏နောက်ဇယားသည်အလွန်နီးကပ်ပါကလွဲသွားသော Cetilistat ဆေးကိုကျော်။ ပုံမှန်ပုံမှန်အချိန်ဇယားအတိုင်းပြန်လည်စတင်ပါ။ လွဲချော်သောဆေးထိုးရန်အတွက်အပိုဆေးကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနှင့်၊ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံသောက်ရန်သာလိုပါသည်။ သင်၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ယူရမည်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုသည်ဟုခံစားရပါကအလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်ဆိုပါကသင်အမြဲတမ်းသတိပေးမှုပြုလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ် ဦး အားသင့်အားသတိပေးနိုင်သည်။
cetilistat နှင့် orlistat ခြားနားချက်ကဘာလဲ？
orlistat နှင့်အတူကုသမှုကိုလည်းအကြံပြုအနိမ့်အဆီအစားအစာကိုလိုက်နာဘူးသောလူနာအကြားပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်းအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ (AES) ၏နံပါတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Cetilistat သည်ပန်ကရိယနှင့်အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း lipases များကိုတားဆီးပေးသောအပြင် orlistat နှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာကွဲပြားသည်။